Arsenal Oo Dooneysa In Dareenkeeda Suuqa Ay Isugu Geyso Saxiixa Laacib U Dhashay Dalka France – Gool FM
Arsenal Oo Dooneysa In Dareenkeeda Suuqa Ay Isugu Geyso Saxiixa Laacib U Dhashay Dalka France
(Arsenal) 30 Abriil 2018. Arsenal ayaa sara u qaadday xiisaheeda ku aadan inay lasoo saxiixto xidig ka tirsan safka kooxda Lyon, kadib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee soo aadan, wuxuuna saxiixan qeyb ka yahay qorsha ay saraakiisha Gunners doonayaan inay ku xoojiyaan safka kooxda reer London.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England kasoo baxa ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Arsenal ay xiiseeneyso lasoo saxiixashada 24 jirka reer France ee Nabil Fekir. Kaasoo xili ciyaareedkan kooxdiisa ugu dhaliyay 22 gool 37 kulan uu kasoo muuqday.
Laakiin Nabil Fekir ayaa la fahansan yahay in kooxda Lyon ay ku qiimeyn doonto aduun lacageed dhan 50 million pounds. xili kooxda Gunners ay tahay kooxda xiisaha ugu badan ka muujineysa.
Nabil Fekir ayaa sidoo kale ku wanaagsan ka ciyaarista dhanka weerarka garabka, ama khadka dhexe, sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa weerarka tooska ah, taasoo keentay in saxiixiisa ay raacdo xoogan u galaan kooxo far badan ee horyaalka dalka France ah, xidigan ayaa xirtay maaliyada xulka qaranka France 10 kulan
Xidigan ayaa ku joogo kooxda Lyon, heshiis gaarsiisan ilaa iyo 2020, waxayna Arsenal xidigan ay isha ku heesay ku dhawaad ilaa iyo 20 –ka bishii April ee lasoo dhaafay.
HORDHACA: Real Madrid vs Bayern Munich, Ciyaarta Lugta Labaad ee Afar Dhamaadka Champions League